Daawo: Xubnaha Hawiye Oo Fariin Adag Ka Diray Shirkole » Axadle Wararka Maanta
Daawo: Xubnaha Hawiye oo fariin adag ka diray Shirkole
Muqdisho (Axadle) – Xildhibaanno iyo saraakiil ciidan oo ka socda beesha Hawiye, isla markaana xaalad kacsanaan ah gelinkii dambe ee maanta ku yimid aagga Shiirkole ee degmada Hodan, ayaa shir jaraa’id oo xasaasi ah ku qabtay halkaas.
Qaar kamid ah xildhibaanada booqday Shirkole ayaa warbaahinta u sheegay inay taageersan yihiin Jeneraal Saadaq John oo saldhig militari ka sameystay deegaankaasi kadib markii lagu soo wargaliyay in dowlada ay soo qaadi doonto weerar.
Senator Yuusuf Dhagey oo ka mid ah mudanayaashii booqday Shirkole ayaa uga mahadceliyay dadka deegaanka sida geesinimada leh ee ay uga soo horjeedaan gardarada dowladda.
Sidoo kale Senator Dhagey ayaa sheegay in dalkan uu ahaa mid aad u fog isla markaana uusan ku shaqeyn karin waqtigan soo noqoshada isla markaana aysan aqbali doonin.
Wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay weerareyso cid kasta oo aan ku raacsaneyn arrintaas wuxuuna ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada inay dib ugu laabtaan teendhada Afisyooni.
“Gam waa meesha markii ugu horreysay tan iyo kacdoonkii kacaanka looga hortagayay Siyaad Bare, waxaa lagu yaqaanaa dhammaan howlaha laga soo bilaabo guusha,” ayuu yiri Ogosto.
“Waxaan soo marnay qaybo badan oo magaalada ka mid ah waxaanan aragnay dhulal badan oo ay ciidamadu diyaar u yihiin inay dib ugu soo celiyaan dimuqraadiyadda,” ayuu sii raaciyay Dhagey.
Xildhibaan C / llaahi Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada booqday Shirkole ayaa uga mahadceliyay dadka deegaanka sidii ay isaga difaaceen gardarada wuxuuna ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay tahay arxan laawe.
C / laahi Axmed Nuur ayaa sidoo kale sheegay in Saadaq John uusan wax dambi ah galin isla markaana uu kaliya u sheegay dowlada inay qabato doorasho wuxuuna tilmaamay in hada kadib ay u aqoonsan doonaan madaxweyne Farmaajo hogaamiye kooxeed.
“Cabdullaahi waa kan ugu daciifsan dadka dhexdiisa wuxuuna dhiiri geliyaa rabshadaha,” ayuu yiri xildhibaan Cabdullaahi.
Dhanka kale Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer oo ka mid ah xildhibaanada booqday Shirkole ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku xadgudubtay dastuurka isla markaana aysan diyaar u aheyn in dalka ay ka dhacdo doorasho xalaal ah.
“Waxaan gumeysan doonnaa ama dumin doonaa dhismayaal dhaadheer, adiga macquul kuma ahan adiga Farmaajo, dadkuna ma aqbali doonaan gumeysi” ayuu yiri Xildhibaan Dhagdheer.